OTU IZU N'IZU FIFA 19: NYOCHAA, NGWUGWU NKE EGWUREGWU - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Egwurugwu XX otu izu izu FIFA 19
EA gosipụtara na otu narị izu nke izu n'izu simulator nke FIFA 19. Ndị na-egwu egwu na-egosi onwe ha n'egwuregwu nke ọma na-enweta ebe dị iche iche na otu kaadị ka mma maka ọnọdụ Team Ultimate. Ònye na maka uru dị na TOP-11 wee banye n'ogo oge a?
Top XX egwuregwu nke òtù FIFA 19
Onye na-eche nche
Aka aka nri
Onye na-eche nche nke Nice bụ onye Argentina Benin Benitez. O wee ghọọ otu n'ime ndị dike nke egwuregwu ụlọ ahụ megide Nîmes, na-egosipụta ngbapụ asaa site na ndị agha ahụ si na ndịda France.
Kaadị dị mma natara ọkwa nke 84, na ndị na-egosi nhọpụta ọnọdụ na ihe mgbagwoju anya bilitere site na nkeji 10 ma e jiri ya tụnyere kristal klas ahụ.
Ndị isi atọ na-agbachitere ndị kachasị mma na-emeghe ndị agha Brazil si Montpellier Ilton. Onye isi ndị agha ahụ ghọrọ otu n'ime ndị na - emepụta Kahn. Ilton dị afọ 41 mere nke a onye ndú nke ndị na-agbachitere, na-ekwe ka ndị na-alụ ọgụ nanị okpukpu abụọ iji gbaghaa mgbaru ọsọ Ben Lekomta.
The new defender card received a rating of 84, ma o yikarịrị ka ndị gamers ga-emeghe ichu nta maka dike nke Sunday egwuregwu, n'ihi na ọsọ ọkpụkpọ ọsọ ka dị nnọọ ala - 44 nkeji, nke kpamkpam enweghị ike na meta ugbu a.
Onye na-agbachitere ìgwè ndị kpakpando nke abụọ n'izu gara aga bụ Jose Maria Jimenez. Uruguayan dị afọ 26 na-eto eto ma na-etowanye ike na-esote Diego Godin nwere ahụmahụ ọzọ na-agbachitere Atletico Madrid. Ikpeazụ egwuregwu megide Getafe bụ ihe akaebe nke nke ahụ. Mgbidi Uruguayan nyere ndị ịgba ọsọ ọsọ naanị ka ha merie ya ugboro abụọ. José meriri agha niile na-agba ịnyịnya ma mee ka pasent 84 zuru oke.
Ọganihu ndị ọrụ adịghị dị mkpa dị ka ndị ọzọ egwuregwu na listi. Kaadị ya gbakwunyere naanị pasent 2, ebe ọ gbanwere site na 84 ruo 86.
Onye nke atọ na-agbachitere usoro nke otu izu ahụ bụ ọnụala nke Barcelona Nelson Semedo. Onye na-abịa ọhụrụ na-achọ onwe ya na otu, ma mgbalị ya zuru ezu iji nyere ọgbakọ ahụ aka na Girona. Egwuregwu ndị ọbịa bịara bụrụ ihe ịma aka nye ndị Catalan, ma na nkeji itoolu nke egwuregwu ahụ, Semedo nwetara ihe mgbaru ọsọ, na-ekwe ka ndị ahụ na-egwu egwu na ịgba chaa chaa nke ndị agha ahụ nyere.
Ndị Portuguese natara ụba na ntinye nke ụyọkọ atọ na ntakịrị iwepụ isi akụkọ.
Akụkụ aka ekpe bụ na ebere nke onye na-arụ ọrụ ike bụ Rafael Gereiro si na Borussia Dortmund. The Portuguese wee kpọmkwem akụkụ ke mmeri nke Hanover na akara nke 5-1.
Onu aka ekpe, nke Miiko Albornoz gbachitere, gbawara ya, Gereiro abughi nani onye nyere ya aka, o bukwara ibu, nke o kwesiri iburu na onu ogugu 4 si 78 ruo 82.
N'ụzọ ụfọdụ, ọtụtụ Portuguese dị ugbu a nke izu ụka ... Juventus na ndị agbata obi Cristiano Ronaldo Zhao Cancelo nyeere ìgwè ahụ aka imeri mmeri siri ike banyere Roman Lazio. Ndị Portuguese na-ama onwe ya na nkeji iri anọ na asatọ nke nzukọ ahụ, na 88 kpaliri ya imejọ onye iro ya na mpaghara ikpe, inweta ụgwọ. Mee ya, n'ezie, KriRo.
Kaadị ọhụrụ ahụ na ọnụego nke 87 na-adọta mmasị nke ndị egwuregwu na-egosi ngwa ngwa nke ọsọ, dribbling na àgwà nke mmemme.
Ihe a na-atụghị anya ya bụ otu nke otu izu ahụ Spaniard Joan Hordan sitere na ndị ala ala dị ala nke La Liga Eibar. N'etoro egwuregwu ya na Leganes, onye etiti midfielder nyere onye enyemaka ma merie ihe mgbaru ọsọ. Na mgbakwunye, ọnụego ziri ezi nke pasent karịrị 81%, ọkpụkpọ ahụ egbughịkwa ọgụ ọ bụla na ikuku.
Na ogo, kaadị Hordan dị elu site na mpaghara 7. Ihe ngosi dị ịrịba ama nke ịba ụda, nnyefe na mmetụta.
Onye na-egwu egwuregwu na otu egwuregwu n'izu n'ibute onye na-egwu egwu n'etiti Atalanta Alejandro Gomez. Otu n'ime egwuregwu kachasị egwu nke oge anyị na-enwe ohere maka nnyefe siri ike site n'ọnọdụ ọ bụla. Mkpebi ndị gbara ọkpụrụkpụ ya emeghị ka Atalanta kwụsịrị egwuregwu ahụ megide isi obodo Roma. Onye Argentine ahụ nyere aka abụọ ma nyere 94% nke ezi njem site na egwuregwu. A kediegwu ọnụ ọgụgụ maka onye na-awakpo ọkpụkpọ!
Alejandro welitere 3 nke ọnụ ọgụgụ ya ma gbanwee ọkwá ya dị mkpa site n'itinye aka n'ihu na ịwakpo onye na-egwupụta egwu.
N'akụkụ aka ekpe nke ọgụ ahụ a na-emelite n'izu ahụ bụ otu onye na-agba ọsọ Argentinian Angel di Maria. Enyemaka nyeere PSG aka Rennes. Di Maria nwetara ihe mgbaru ọsọ na enyemaka.
Kaadị ọhụrụ ya natara ọkwa nke 87, nke bụ 3 nkeji dị elu karịa kaadị ahụ. Nke a bụ onu nke abụọ nke Argentine na otu nke izu ahụ: akara akara ya gara aga bụ akara nke 86 nkeji.
N'elu aka nri nke agha ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ na-adịghị agafe agafe, ezigbo igwe maka mbibi nke nchekwa Fabio Quagliarella si Sampdoria. Onye dị afọ 36 na-aga n'ihu bụ nke mbụ na agbụrụ Serie-A bombu, n'ihu Cristiano Ronaldo na Duvan Zapata. 16 ihe mgbaru ọsọ na egwuregwu 20 na oge a! Enwere m otu ìgwè nke izu izu Fabio maka mmadụ abụọ ma nye aka na ọnụ ụzọ ámá nke Udinese ahụ.
Ụka nke kaadị ahụ bilitere site na 5 nkeji, na ọsọ ọsọ nke onye na-awakpo ugbu a anaghị ele anya n'enweghị olileanya.
Karim Benzema weere òkè na mmeri abụọ ikpeazụ nke Real Madrid. Ihe mgbaru ọsọ mgbe niile na-echetara anyị na ọ bụghị ihe efu na Karim ka ewerere na ọ bụ onye isi ụlọ eze ahụ ruo ọtụtụ afọ. Ugboro abụọ na ọnụ ụzọ ámá nke Hispaniola na La Liga na ihe mgbaru ọsọ nke Girona na Spanish Cup kwenyesiri ike na EA inye onye French onye na-egwu card nke izu na ọnụego nke 86.
N'ịdị mma, Map Njikọ Njikọ site na ụdị nke ihe pụrụ iche na ọnụ ọgụgụ nke 87 ka dị mma.
Nke a bụ otú isi usoro nke XX nke izu na FIFA 19 si pụta. N'elu bench, ọ dị mma ịkọwapụta ọdịda dị n'ihu site na Republic of Belarus Leipzig Yusuf Poulsen na ọnụ ọgụgụ nke 84, gaa Brescia Alfredo Donnarumma nke nwere ihe ngosi na hapụrụ Borussia si Mönchengladbach Oscar Wendt na 81.
Eleghi anya otu n'ime ụmụ okorobịa a abanyela n'òtù gị, n'ihi na kaadị ụfọdụ dị mma! N'eziokwu, ndị na-eme egwuregwu football ejirila aka na-eme baptizim na otu narị afọ nke otu izu nke otu n'ime ndị na-enweghị ihe ịga nke ọma na FIFA 19 n'ihi ọnụ ọgụgụ dị nta nke egwuregwu kachasị elu. Otú ọ dị, mmadụ ekwesịghị ichefu na ndị gosipụtara onwe ha n'egwuregwu ahụ bụ ndị so n'òtù mba ahụ. Ihe e dere na ya nwere ikike ịlụ ọgụ ọbụna mgbakọ mmemme kachasị elu, ma nye ụfọdụ ndị, ọ bara uru ịhazi nchụso onwe onye.